Dowlada Emaraadka oo wadata laba musharax kuna khasbaysa Madaxda Dowlada goboleedyada Somalia – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Dowlada Emaraadka oo wadata laba musharax kuna khasbaysa Madaxda Dowlada goboleedyada Somalia
Allhadaaftimo October 31, 2016 Uncategorized
Iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay dalka isu tagga Imaaraadka Carabta ku sugnaayeen Madaxda maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya ayaa waxaa jiray warar soo baxayay oo sheegayay in kulamo uu u socday madax ka tirsan Imaaraadka Carabta.
Kulamada oo ahaa kuwo qarsoodi ah ayaa looga hadlayay arrimo badan oo la xiriirta doorashada Soomaaliya iyo qorshe Imaaraadka Carabta wadato oo ku saabsan Musharaxiin ay si gaar ah u daneyneyso.
Madaxda maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, Jubbaland, Hirshabeelle iyo koofur galbeed ayaa ku sugnaa maalmihii u dambeeyay dalka isu tagga imaaraadka Carabta, waxaana lagala hadlayay sidii ay u taageeri lahaayeen Musharaxiinta ay wataan.
Safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Maxamed Al-Cutmaani ayaa ahaa maskaxdii ka dambeysay in Madaxda maamul goboleedyada lagu casuumo Imaaraadka Carabta oo kulamo qarsoodi ah ay wada qaataan.
Warar ay heleyso Jowhar.com ayaa sheegaya inuu soo gaba gaboobay kulamadaas, isla markaana lagu wado in maanta iyo berri ay dalka dib ugu soo laabtay Madaxda maamul goboleedyada ee maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Dubai.
Ilo wareedyo ku dhow dhow Madaxda maamul goboleedyada ayaa sheegaya in Imaaraadka Carabta ay u dhiibeen warqad ay ku qoran yihiin Labo musharax ay wataan.
Imaaraadka Carabta ayaa markii hore taageersanaa in mar kale la soo doorto Madaxweyne Xasan Sheekh, balse haatan ka baxday, iyagoo labo musharax oo kale oo ay doonayaan in mid la doorto.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo muddooyinkii u dambeeyay culeys uga imaanayay Beesha caalamka ayaa u muuqda inuu waayay taageeradii ugu weyneyd ee uu ka heystay Imaaraadka Carabta.
Waxaa cadaatay in Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka ay isku mowqif ka yihiin arrinta doorashada iyo Musharaxa ay doonayaan, waxaana loo arkaa in Imaaraadka uu yahay wakiil qarsoon oo Mareykanka u qaabilsan arrimaha doorashooyinka.
Imaaraadka Carabta ayaa saameyntiisa siyaasada Soomaaliya ay sii xoogeysaneysa saddexdii sano ee u dambeeyay, isagoo xiriir dhow la sameysanayay maamul goboleedyada dalka ka jira oo uu si kala gaar gaar ah ula macaamilayay, waxaa ay siiyeen taageero milateri, mid dhaqaale iyo agabyo kale.
Previous Madaxweyne Cabdi weli Gaas iyo Cabdikariim Guuleed oo Abudhabi waddahadal uga furmay
Next Af somaligii waa sii dhamanayaa Abwaan sacid salax
Tacsi Hasan farah Mohamed May 25, 2020
Archives Select Month May 2020 (61) April 2020 (104) March 2020 (177) February 2020 (160) January 2020 (163) December 2019 (165) November 2019 (168) October 2019 (138) September 2019 (152) August 2019 (166) July 2019 (166) June 2019 (162) May 2019 (158) April 2019 (114) March 2019 (128) February 2019 (95) January 2019 (148) December 2018 (129) November 2018 (99) October 2018 (104) September 2018 (98) August 2018 (98) July 2018 (93) June 2018 (130) May 2018 (124) April 2018 (97) March 2018 (140) February 2018 (93) January 2018 (131) December 2017 (113) November 2017 (95) October 2017 (84) September 2017 (98) August 2017 (121) July 2017 (120) June 2017 (94) May 2017 (119) April 2017 (112) March 2017 (117) February 2017 (139) January 2017 (118) December 2016 (89) November 2016 (114) October 2016 (98) September 2016 (91) August 2016 (95) July 2016 (91) June 2016 (73) May 2016 (68) April 2016 (55) March 2016 (100) February 2016 (67) January 2016 (71) December 2015 (73) November 2015 (58) October 2015 (64) September 2015 (81) August 2015 (60) July 2015 (60) June 2015 (52) May 2015 (43) April 2015 (59) March 2015 (57) February 2015 (62) January 2015 (96) December 2014 (22) November 2014 (69) October 2014 (133) September 2014 (144) August 2014 (38)